DHEGEYSO-Madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo eed kulul ujeediyey DFS. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweynaha maamulka gobolada dhexe oo eed kulul ujeediyey DFS.
Oktoobar 30, 2016 12:31 b 0
Dhuusamareeb, Oct 30 2016–Madaxweynaha Maamulka Ahlusuna Waljamaaca Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa si kulul weeraray Dawlada Federaalka Soomaaliya, isagoona sheegay inay Cadaado keentay waxaan u cuntamin shacabka gobolada dhexe.
Sheekh Maxamed Shaakir, madaxweynaha maamulka gobolada dhexe waxa uu sheegay in Wakhtigeeda uu dhamaaday ayna Socdaal Diyaaradeed ay sidii Dad Dalxiis ah udawaafayaan Deegaanada Gobollada Soomaaliya.
DHEGEYSO Warbixin-Dhalinyarada Soomaalidu Yurub Maka helaan shaqo.
DHEGEYSO-Dadkii ka cararay Qandala oo gurmad lagaarsiiyey.